Patrice Émery Lumumba (oo si kale loogu beddelay Patrice Hemery Lumumba; 2 Luulyo 1925 - 17 Janaayo 1961) wuxuu ahaa siyaasi reer Kongo ah iyo hogaamiye madaxbanaan oo soo noqday Raiisel Wasaarihii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo (markaa Jamhuuriyadda Koongo) Sebtember 1960. Wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray isbadalki Kongo ee gumeysi ee Beljamka oo noqotay jamhuuriyad madaxbanaan. Fikrad ahaan waa muwaadin Afrikaan ah iyo panis-Africanist, wuxuu hogaaminayay xisbiga Kongo National Movement (MNC) laga soo bilaabo 1958 ilaa dilkiisa.
Wax yar ka dib markii xornimada Congo qaadatay 1960, waxaa dhacay xasuuq ciidan, taas oo astaan u ah bilowga qalalaasaha Kongo. Lumumba wuxuu ka codsaday Mareykanka iyo Qaramada Midoobay caawinaad si loo xakameeyo goos goosadadii Katangan ee ay taageereen Moise Tshombe. Labaduba way diideen, sidaa darteed Lumumba wuxuu u jeestay Midowgii Soofiyeeti mid taageera. Tani waxay keentay kala duwanaansho sii kordheysa oo dhexmarta Madaxweynaha Joseph Kasa-Vubu iyo madaxa shaqaalaha Joseph-Désiré Mobutu, iyo sidoo kale Mareykanka iyo Beljim, kuwaas oo ka soo horjeedsaday Midowgii Soofiyeeti ee Dagaalkii Qaboobaa.
Lumumba ayaa markii dambe ay xireen masuuliyiinta gobolka ee Mobutu waxaana toogtay koox toogasho ah oo hoos imanaya taliska masuuliyiinta Katangan. Dilkiisa kadib, waxaa si weyn loogu arkay inuu shahiid u ahaa dhaqdhaqaaqa ballaaran ee Pan-Afrika. Sannadkii 2002, Biljamka ayaa si rasmi ah u raaligelisay doorkeeda dilkii.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrice_Lumumba&oldid=203531"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Luuliyo 2020, marka ee eheed 15:13.